ငါယူမယ်, ထိုအခါ, ယရှေုသညျခုနှစ်တွင်ဒါကမယုံကြည်သော — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါယူမယ်, ထိုအခါ, ယေရှု၌ကမယုံကြည်သော (ယေရှု၌ယုံကြည်သူမဟုတ်ပါ) တစ်ဦးကအခြားအရာရာ၌စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရှာနိုင်ရန်အတွက်ယရှေုသညျမှထွက်သွားသည်. ထိုအခါယေရှု၌ယူဆခကျြကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Long ၏စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့အယေရှုအားကြွလာ.
ယုံကြည်ချက်ခေါင်းကိုအဓိကအားဖြင့်အချက်နှင့်အတူတစ်ဦးသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး; ကအဓိကအားဖြင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့သညျယရှေုအပေါ် fastens သောနှလုံး၌တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်ဖြစ်ပါသည်. [ယရှေုသညျကပြောပါတယ်,] '' ငါ့ထံသို့လာသောသူသည်ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ငတ်မွတ်သူကရေငတ်ဘယ်တော့မှရကြလိမ့်မည်မဟုတ်မည်!''